10mm amerikanina karazana hosotra clmp
Ny vokatra dia mampiasa fantsom-by amin'ny alàlan'ny lavaka famandrihana mba hahatonga ny kirikitrany hifandray akaiky amin'ny fehikibo vy.
Mora ampiasaina, azo esorina amin'ny halavany rehetra.
12.7mm amerikanina napetraka
Ny fifandonan'ny hosotra anglisy dia amin'ny fanoratana
Ny fanambanin'ny trano fonenana ho an'ny fanoratana hosotra karazana anglisy miaraka amin'ny lasantsy.
Ny fametahana V-band dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy vy, tsara ny fanoherana.Noho io clamp io dia matetika ampiasaina amin'ny flanges, flanges amin'ny habe samihafa tsy afaka mampiasa ny aloka, na ny fitrandrahana dia hitranga, noho izany ny fametrahana dia mila manome sarina flange na aloka.
Ampiasaina mampifandray ny fivoahana amin'ny turbocharger sy ny fantsom-baravaran'ny fiara. Izy io dia afaka misoroka ny supercharger ho be loatra ary simba ny fihovitra ao ary ny adin-tsaina mahery vaika.
Ny T-bolt miaraka amin'ny clamp lohataona dia manampy loharano eo amin'ny famaranana ny T-bolt mahazatra mba handraisana ireo fiovan'ny be dia be kokoa, manome tsindry tombo-kase sy fanatanjahantena azo antoka.
1234 Next> >> Pejy 1/4